Gịnị bụ ajọ ifufe? | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe enwere oke ikuku nke na-emebi oke ihe n’akuku odida anyanwu Pacific, a na-ekwughachi okwu a otutu ajọ ifufe, nke na-edugakarị n'ọgba aghara mgbe ọ bụla n'eziokwu ekwesịghị ịdị. Nhazi a nwere otu njirimara dika ifufe nke mejuputara na Atlantic. N’ezie, ọ bụ nanị otu ihe ka ha nwere: ebe ọzụzụ ha.
Nke a putara na ha bu ihe omimi nke ihu igwe nke nwere ike iju anyi anya ma mee ka anyi tu egwu, dabere na ike ha na ebe ha no. Ma, Kedu ihe ha bụ?
1 Olee otú e si kee ajọ ifufe?
2 Typhoon Atiya
2.1 Gịnị bụ Saffir-Simpson n'ọtụtụ?
2.2 Nhazi oke ifufe
3 Hà bara uru?
Olee otú e si kee ajọ ifufe?
Typhoons ma ọ bụ ajọ ifufe bụ ajọ ifufe na-ekpo ọkụ nke na-etolite na Atlantic na Pacific, mana naanị ma ọ bụrụ na oké osimiri ahụ na-ekpo ọkụ nke ukwuu, na-enwe ọ dịkarịa ala ogo 22 Celsius. Mmiri ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ na-ebili na-ebute ebe nrụgide ikuku dị ala n'akụkụ oke osimiri. Kedu ihe mere? Ifufe, na-aga n'akụkụ ndị ọzọ, na-eme ka oké ifufe ahụ na-amalite ịtụgharị.
Ikuku na-ebili ngwa ngwa na ngwa ngwa na-ejuputa oghere dị ala, nke ikuku na-ekpo ọkụ si n'elu mmiri na-eri. N'otu oge ahụ, ọ na-amịkọrọ oyi na ikuku ikuku site n'akụkụ dị elu, nke a na-eduzi ala. Mana nke a anaghị akwụsị ebe a: mgbe ị na-agafe n'oké osimiri, ifufe ahụ na-aga n'ihu na-abawanye ka anya ifufe ahụ na-amịrị ikuku ọkụ. N'etiti ihe ahụ ọnọdụ dị jụụ, yabụ ikuku ikuku dị oke ala.
Gịnị bụ Saffir-Simpson n'ọtụtụ?
A na-ekewa ọsọ ọsọ nke ifufe nke ihe ndị a dị ka oke ifufe Saffir-Simpson. Onye injinia obodo ahụ bụ Herbert Saffir na onye ntụzi ọrụ nke United States National Hurricane Center, Bob Simpson mepụtara ọnụ ọgụgụ a na 1969.
Ọ bụ Saffir mepụtara ihe mbụ ahụ, ọ ghọtara na ọ nweghị oke ọkwa iji kọwaa mmetụta nke ajọ ifufe. N'ihi ya, ọ mepụtara otu nke nwere oghere ise dabere na ọsọ ikuku. Ka oge na-aga, Simpson ga-agbakwunye mmetụta nke ebili mmiri na idei mmiri.
Na mgbakwunye, ka ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ na-enweta ume, ọ gafere ụzọ abụọ dị iche iche, nke bụ nkụda obi nke ebe okpomọkụ na oke ikuku. Ka anyị hụ otú ha si dị iche:
Nsogbu Tropical: ọ bụ usoro a na-ahazi n'ígwé ojii na mmiri ozuzo eletrik nke nwere mgbasa ozi akọwapụtara nke ọma. Nsogbu etiti bụ> 980mbar, na ikuku ikuku si 0 ruo 62km / h. O nwere ike ibute oke ide mmiri.
Oké ifufe: ọ bụ usoro a haziri ahazi nke oke mmiri ozuzo siri ike na mgbasa ozi akọwapụtara. Ọ nwere ọdịdị cyclonic, na nrụgide etiti bụ> 980mbar. Ifufe nwere ike ịfe n’agbata 63 na 117km / h, yabụ na ha nwere ike iwepụta oke ebili mmiri.
Nhazi oke ifufe
Ọ bụrụ na ajọ ifufe ahụ na-esikwu ike, mgbe ahụ a ga-akpọ ya ajọ ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe.
Nkeji 1: nsogbu nke etiti bụ 980-994mbar, ikuku ikuku bụ 74 ka 95km / h, na ebili mmiri dị n'etiti 1,2 na 1,5m.
Ọ na-ebute idei mmiri nke dị n'ụsọ oké osimiri, yana emebi osisi na ahịhịa, ọkachasị ndị nke a kụrụ n'ime obere oge.
Nkeji 2: nrụgide nke etiti bụ 965-979mbar, ikuku ikuku bụ 154 ka 177km / h, ma ebili mmiri dị n'etiti 1,8 na 2,4m.
Ọ na-emebi ụlọ, ibo ụzọ, windo, na ahịhịa, nakwa ụlọ ndị na-agagharị agagharị.
Nkeji 3: nrụgide etiti bụ 945-964mbar, ikuku ikuku bụ 178-209km / h ma ebili mmiri dị na 2,7 ruo 3,7 mita.
Ọ na-emebi oke osimiri, ebe ọ na-ebibi obere ụlọ. Enwere ike iju mmiri n'ime obodo.
Nkeji 4: isi mgbali bụ 920-944mbar, ikuku ikuku bụ 210 ka 249km / h, ebili mmiri dịkwa n'etiti 4 na 5,5m.
Ọ na-ebibi nnukwu ụlọ obere mbuze, mbuze nke osimiri, na ide mmiri.
Nkeji 5: nrụgide nke etiti bụ <920, ikuku ikuku karịrị 250km / h, ma ebili mmiri dị karịa 5,5m.
Ọ na - ebibi oke osimiri: idei mmiri, mbibi nke elu ụlọ, osisi na - ada ada, mbuze mbu. Maykpọpu ndị bi na ya nwere ike ịdị mkpa.
Hà bara uru?
Ikwu okwu banyere oke ikuku nke okpomoku bu mgbe nile, ma obu ihe n’eme, na ekwu okwu banyere ihe ndi n’emebi otutu ihe. Ma nke bụ eziokwu bụ na-enweghị ha, n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa ha ga-enwe ọtụtụ nsogbu.
Yabụ, uru ya bụ:
Ha na-ebu mmiri ozuzo na ifufe, na-enyere aka na ebe akọrọ adịghị akpọ nkụ.
Ha na-eme ka ọhịa dị ọhụrụ. Ihe nrịanrịa na / ma ọ bụ nke na-esighi ike anaghị egbochi ngafe nke ajọ ifufe, yabụ mgbe ewepụrụ ha, ha na-ahapụ ohere maka mkpụrụ ga-eto ma too.
Dejupụta mmiri ma na-agbanye mmiri mmiri ya mere ndị ọrụ ugbo nwere ike irite uru.
Ha na-enyere aka belata ọnọdụ okpomọkụ na mpaghara ogbe nke ga - adi elu.
Typhoons bụ otu n'ime ihe ịtụnanya ihu igwe na-atụghị anya, ị naghị eche? Enwere m olileanya na isiokwu a bara uru maka ịmara njirimara ya na otu esi ekewa ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Gịnị bụ ajọ ifufe?
Terraforming nke Mars